Sina: Voatohitohina Ilay Rindrinafo Goavana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2019 17:07 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aprily 2006)
Ho an'ny olompirenena Sinoa ankapobeny mpampiasa aterineto, misy manda roa lehibe ny Adin'ny Antoko Kaominista Sinoa amin'ny fahalalahana miteny. Ny hita aty aloha dia ireo fitaovana fikarohana, izay mety hamelan'ny fangatahana ahitàna tenifototra saropady anao hahatratra, fara-fahalaviny, ny pejy faharoa misy ireo vokatra – raha toa ka mipoitra koa aza izy ireo – mialoha ny hisian'ny tsy fihetsehan'ny fitety (navigateur) sy ny fahatapahan'ny Aterinetonao, matetika mandritra ny roapolo na telopolo minitra isaky ny mandeha.
Ny ao ambadika kosa dia ireo vohikala sy bilaogy izay, raha tsy miteraka baiko fitsaharana ireo litera tsy mety, dia misy rindrambaiko mandeha izay mamadika haingana ilay pejy manafintohina ho tsy afaka jerena. Indraindray hanome antoka ny fahaveloman'ny bilaoginao ny famafàna ilay votoaty manafintohina. Matetika kosa tsy izay no mitranga.
Te hamoaka lahatsoratra mikasika ireo olana ara-politika sy ara-piarahamonina misy ianao, kanefa rehefa manohitra anao ny teny, inona no azon'ny bilaogera atao?
Toa vahaolana ny fanaovana “podcasts”, fara-faharatsiny aloha mandra-pahatraran'ny teknolojia fanaraha-maso ny feo ny zava-baovao – hevitra iray tsy very ao amin'ny Bilaogy Demokratikan'i Sina, “Neo”, ny bilaoginy MSN Spaces mitondra io anarana io ihany izay voasakana tao amin'ny tanibe vao haingana izay.
Ny voalohany, tatitra iray [vohikala maty] mikasika ny solontenan'ny Fivoriana Fakàn-kevitra Ara-politika Amin'ny Vahoaka Sinoa, Zhang Xianliang, sy ny tolokeviny amin'ny fanamboarana tranombakoka momba ny Rivopanovàna Ara-kolontsaina [pejy voafafa].
Manarak'izay, mamoaka andianà rakipeo efatra [vohikala maty] an'i Ming Ju-zheng (明居正), Zokiolona ao amin'ny departemantan'ny siansa politika ao amin'ny Anjerimanontolom-pirenen'i Taiwan, miresaka mikasika ilay Rivopanovàna Ara-kolontsaina, ny Neo.
Boky voalohany: Tao anatin'izay telopolo taona taorian'ny niafaran'ilay Rivopanovàna Ara-kolontsaina izay, samy mandositra izay resaka momba azy io avokoa ireo tomponandraikitra ao amin'ny Antoko Kaominisita Sinoa. Tena ilaina ny fahafahantsika mahazo jeritodika. Miezaka ny hanazava olana telo lehibe ity lahatsoratra ity: ireo antony nanosika an'i Mao Zedong sy ny anjara asany tanatin'ny fanatanterahana ilay Rivopanovàna Ara-kolontsaina, ny antony nampiasainy paikady toy izany mba hakàna ny fahefana, sy ny anjara asan'ny Antoko Kaominista.
Boky Faharoa: Resahina anatin'ity boky ity ny mikasika ny sasany amin'ireo tranga hita nandritra ilay Rivopanovàna Ara-kolontsaina toy ny tolona fanoherana ny kapitalista, ny fanindrahindràna olona, ary ny fomba nitarihin'ny famelàna ny politika hamaritra ny raharaham-panjakana nankany amin'ny ady mahatsiravina toy ireny. Miresaka manokana mikasika ny endrika tsy mitombin'io Rivopanovàna Ara-kolontsaina io izy ary manadihady ny fandravàna natao tamin'ny fiarahamonina sy ny olombelona Sinoa.
Boky fahatelo: Mijery ny momba ireo andraikitr'i Lin Biao, ny Tariky ny Efatra sy ireo Mpiambina Mena tanatin'ilay Rivopanovàna Ara-kolontsaina io boky io ary mandroso fomba fijery hafa amin'ny an'ny Antoko Kaominista Sinoa.
Boky fahefatra: Tranga ara-politika sasany taloha sy taorian'ilay Rivopanovàna Ara-kolontsaina sy fiantraikany ratsy teo amin'ny fiainana ara-politika sy ara-piarahamonina tao amin'ny tanibe, anatin'izany: ireo fanamelohana ampahibemaso sy fampiakarana fitsaràna, fizarazaràna, famporisihana ara-bola amin'ny fanabaribariana ny tsy mety ara-politika, izany rehetra izan izay voaresaka amin'ny antsipiriany avokoa.
Hatramin'ny oviana no hijanona ho safidy maharitra amin'ny fanembatsembanana ny sivana anaty Aterineto ireo podcasts? Ndeha hanantena fa ho lava nóho ny fotoana ilain'ny Cisco mba handehanana mankany amin'ny banky.